मन्त्री पाउने समयमा नपाएकै हो , अब दलित विधेयक ल्याउने योजना छGandaki Press
कार्तिक २५, २०७८ १४:४६ मा प्रकाशित
गण्डकी प्रदेशमा अहिले एकमात्र विना विभागीय मन्त्री रहेका छन् । एक महिना अघिमात्रै मन्त्रीको सपथ खाएका सांसद् दोबाटे विश्वकर्मासंग गरिएको कुराकानी
प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो सत्ता पक्षमा आउँदा कस्तो लागिरहेको छ सोच्नुभएको थियो ?
सोचेका थिएनौँ । यो राष्ट्रिय राजनीतिको परिघटनाले ल्याएको अवस्था हो । यस्ले राजनीतिमा ठुलो सम्भावनाहरु भइराख्छन भन्ने देखाएको भन्ने मलाई लाग्छ ।
दुई कुराको अनुभव गर्नुभयो एउटा प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा र अर्को मन्त्रीबाट नाम काटिएर पुनः मन्त्री नियुक्ति हुनुभयो त्यो बेला कस्तो भयो ?
यो प्रतिपक्षमा रहँदा खेरी २०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षिको भुमिकामा रहन भन्दै मतदान दिए । त्यसपछि हामीले जनताले दिएको अभिमतको सम्मान ग¥र्यौ र सहज रुपमा लिदैँ अघि बढ्यौ ।
सरकारले निश्चयनै हामी प्रतिपक्षमा बस्नेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक थियो नै । हामी सरकारमा छौँ जे गरेपनि हुन्छ भन्ने लागेको रहेछ । दुई तिहाई बहुमत भएको बेलामा प्रतिपक्षि भनेको केहि होइन भन्ने मानसिकता थियो त्यसलाई सहजै लिएका थियौँ ।
मन्त्री बन्नु भएकोपनि एक महिना भयो अझै पनि मन्त्रालय पाउनुभएको छैननी ?
हो त्यो पाइएन् । अब मुख्यमन्त्री ज्यूले भन्नुहुन्छ कुन दिने कहिले दिने भनेर मलाई थाहा हुने कुरा भएन् ।
कुन मन्त्रालय दिए हुन्थ्यो भन्ने छ ?
यहि नै भन्ने छैन् । मलाई त्यस्तो केहि छैन अब मुख्य मन्त्रीले मलाई कुन जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भन्नेमा नै भर पर्छ । जुन उपयुक्त हुन्छ त्यहि दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु ।
निष्ठाको राजनीति गर्नेलाई हटाएर धनाढ्यलाई मन्त्री दियो पद यो भनेर निकै कुरा बाहिर आए यस्लाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सांसद् भएपछि मन्त्री हुन पाए भन्ने कुरा स्वभाविक हो ।
जुन बेला सरकार बन्यो त्यसपछि हाम्रो पार्टीको छलफल पनि भयो । त्यसमध्ये मन्त्री बन्नेमा मेरोपनि नाम लिस्टमा थियो तर, विविध कारणले त्यतिबेला पुग्न सकिएन त्यहिकारण हुन सकिएन् त्यहि हो ।
विविध कारण भनेको चाहिँ के ?
त्यो कारण मलाई थाहा छैन् । के थियो भन्ने । पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हुन त्यसले गर्दा मैले धेरै कुरा खोललिन कहाँ के कारण के थियो भन्नेतर्फ म गइन् । पर्न पथ्र्यो तर, नपरेपनि मैले त्यसलाई सहजीकरण तरिकाले नै गए ।
त्यसपछि आएका समाचारका कारण नै मन्त्री बन्नुभयो भन्ने कुरा सत्य हो ?
त्यसमा के चाहिँ आग्रह गर्न चाहान्छु । म यो ढोरपाटन दैनिकबाटै भन्न चाहान्छुकी जबसम्म म मन्त्री बन्नुपर्ने र अवसर पाउनुपर्ने हो त्यो बेला छुट्न गएकै हो ।
जुन कुरालाई सारा मिडिया, शुभचिन्तक र नागरिकले काम गरेकै आधारमा पाउनुपर्ने थियो तर, पाएन भन्ने मुल्यांकन गरेकै आधारमा यस्ले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सारा देशभरी आवाज उठ्न थाल्यो । त्यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
कलम चलेकै कारण पाएको हुँ । यो मान्छेलाई अन्याय भयो भन्ने आवाज उठ्यो जस्को कारण मैले न्याय पाएको ठानेको छु ।
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा पोखरा आउने बित्तिकै मन्त्री बन्नुभयो ,प्र.म.को आशिष लागेको हो ?
होइन यस्को स्पष्ट कुरा छ । जुनबेला राष्ट्रिय राजनीतिबाट परिवर्तनको सुरुवात भएको थियो त्यहि बेलामा प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने देखिएको थियो ।
त्यतिबेला नै पार्टी सभापति देउवाजीले होइन दोबाटेलाई मन्त्री बनाउन पर्छ भन्ने एक किसिमको मनाशाय व्यक्त गर्नु भएको थियो । त्यो बेला हुन सकिएन् ।
पछिल्लो समयमा पनि उहाँले यहाँको मुख्यमन्त्री ज्यूसंग सल्लाह गर्ने कुरा, पार्टी सभापतिसंग सल्लाह गर्ने कुरा चलिरह्यो । उहाँले छलफलमा हामीले कतै समावेशीता गरेनौँ की भन्ने पनि व्यक्त गर्नु भयो ।
त्यसमा सिंगो पार्टीदेखि जिल्लावासीसम्मका सबै साथिहरुको भावनालाई चाहि वहाँले ग्रहण गर्नुभयो । त्यतिबेला न्याय दिन सकेनौ कि भन्ने उहाँलाई अनुभुति भयो र गठबन्धनको सरकारसंग छलफल गर्दापनि मिडियाको कुराले अनुभुति भएको रहेछ त्यहिको आधारमा अघि बढेको हो ।
र प्रधानमन्त्री ज्यू यहाँ आएको बेलामा हार्मी पार्टीको कार्यकर्तापनि हौँ, सांसद्पनि हौँ । २४ गते साक्षरता दिवस पनि थियो त्यो दिनमा चाहि गेष्ट हाउसमा हुनुहुन्थ्यो । हामीले भेट्नु कर्तव्यपनि हो । र चाहिँ म सहित ३ जना गएर भेट्यौँ, जय नेपाल भन्यौँ ‘के छ ?’ भन्नुभयो ठिक छ भने अनि निस्किएँ त्यहि हो ।
तपाईँ मन्त्री भएको कुरालाई कांग्रेसको आसन्न अधिवेसनसंग पनि त जोडिएको छ के लाग्छ त्योमा ?
त्यो पनि एउटा पाटो होला । मैले त्यसरी हेरको छैन् । म पार्टीमा लामो समय देखि लागेको मान्छे । चारदशक भन्दा लामो राजनीति गरिसके ।
त्यसले गर्दा हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार कतै कार्यान्वयन भएनकी भन्ने लाग्यो । त्यहि अनुभुतिको आधारमा संविधानको मर्म र भावना, मेरो पनि आफ्नो लगनशिलताको आधारमा भएको भन्ने मलाई लाग्छ ।
शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा रामचन्द्र पौडेल पक्षले खेलेको खेलका कारण तनहुँमा तपाईलाई मन्त्री बनाएर प्र.म.ले नयाँ खेल खेलेको भन्ने सुनिन्छ सत्य हो ?
होइन् यस्तो खाले कुरा मलाई निराधार जस्तो लाग्छ । पार्टीको एउटा सभापति जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ वहाँले म एउटा कार्यकर्तालाई प्रदेको जिम्मेवारी बनाउने कुरामा खेल खेल्नुपर्ने जस्तो कुनैपनि कुरा छैन् ।
आखिरमा पार्टीको कार्यकर्ता हामीलाई नेताले सहयोग गर्ने हो र हामीले पनि सहयोग गर्ने हो । हामी सम्मान गर्छौ त्यसैले यो खेल खेलेको भन्ने लाग्दैन् ।
दलित आन्दोलन र कांग्रेसबिचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
दलित आन्दोलन र कांग्रेसबिच नङ र मासुको सम्बन्ध हो भन्ने मैले अनुभुति गरेको छु ।
मन्त्री बनिरहँदा प्रदेशमा दलितका लागि चाहिँ के कस्ता योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
गण्डकी प्रदेशमा आज मात्रै मैले बैठकमा पनि कुरा राखेको छु । दुई चरणका कुरा छन् । प्रदेशमा पहिला कुरा त दलित विधेयक ल्याउनुपर्छभन्नेमा म अडिग भएको छु ।
मैले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री ज्यूहरुसंग त्यो कुरा उठाएको छु । आउने प्रदेशसभाको अधिवेशनमा दलित विधेयक पास गराउनेमा मेरो भुमिका रहन्छ भन्ने हो ।
अर्को कुरा हामीसंग भएको बजेटमा दलितहरुले कसरी आयआर्जन गर्न सक्छन् र कसरी व्यवसाय गर्न सक्छन् त्यतातिर बढि प्राथमिकता दिनेपर्छ भन्ने सोचमा छु ।
दलित विधेयक किन आवश्यक ?
दलित विधेयक आउनका आवश्यकता विविध कुराहरु छन् । विधेयक अर्थात कुनैपनि ऐन कानून तथा नियमहरु चाहिँदो रहेछ । संविधान भएपनि हाम्रो ऐनहरु बनेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा हाम्रा ४६ वटा विधेयकहरु पास भए । हरेक कुरा ऐन, कानून, विधेयक नभई कुनैपनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसकारणले हामीले गण्डकी प्रदेशमा पनि दलितसम्बन्धि विधेयक ल्याउन लागेका हौँ ।
अहिले विना विभागको मन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रालय सम्हाल्दा बजेट नहुने होला त्यतिबेला समस्या आउँदैन् ?
जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भनिन्छ । समस्याहरु आउँछ त्यसको उपाय आउँछ । मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि बजेटले रोकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् । पहिला मन्त्रालय स्थापना भइसकेपछि बजेट व्यवस्थापन पनि होला ।
आगामी योजनाहरु के के छन् छ ?
आगामी योजनाहरुमा मेरो व्यक्तिगत योजना केहि पनि छैनन् । मुख्यकुरा गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना के हो भन्ने कुरा नै हो । प्रदेश सरकारको योजना भनेको अहिलेचाहिँ विकास निमार्णका कामभनेको त हुनेनै भयो ।
पहिलो काम भनेको चाहिँ प्रदेशबासीलाई कोरोना विरुद्धको खोप सहज रुवमा प्रदान गर्नुनै हो । अर्को कुरा कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारलाई ५० हजार रुपैँया दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो कुरा भनेको कोभिडबाट अभिभावकको मृत्यु भएको परिवारको बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैँयाका दरले दिने र अर्को कुरा भनेको महिला दिदी बहिनीका लागि पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरका विरामीका लागि निशुल्क शल्यक्रिया प्रदेश सरकारले गरिदिने गरी विधेयक आउँदै छ र चौथो कुरा भनेको सडक बालबालिकालाई सडकमा हुन नदिने कार्यक्रम अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने योजनानै हुन् ।